Pfungwa inoratidza iyo HomePod touch: yekubata sikirini pane Apple speaker | Nhau dze iPhone
Pfungwa inoratidza iyo HomePod touch: yekubata skrini pane Apple speaker
Ngirozi Gonzalez | | HomePod, Noticias
Muna Kurume wegore rapfuura Apple yakafunga kumisa kutengesa kweyekutanga HomePod kusiya musika wese wemutauri mumaoko e HomePodmini. Kudzikira kwehuwandu hwekutengesa uye kuwanda kwechigadzirwa kwakaita kuti apuro hombe isarudze kurega kutengesa yekutanga kuti itarise pane mini vhezheni yeHomePod ine maficha makuru, anodarika kunaka uye mutengo unokwanisika. Nekudaro, kune vazhinji iyo HomePod mini inosiya zvakanyanya kudiwa uye pfungwa yakabuda mumazuva achangopfuura inoratidza a Kumba Pod Touch. Ichi chigadzirwa chaizova chimwe chinhu kunze kwea HomePod mini yakagadziridzwa zvakare ine yekubata sikirini yaizopa akawanda akawanda sarudzo pane yazvino mutauri yeApple.
1 A touch screen yaizounza iyo HomePod Touch kuhupenyu
2 Inzwi uye kushingaira kupindirana, protagonists yechigadzirwa
A touch screen yaizounza iyo HomePod Touch kuhupenyu
Iyo yazvino HomePod mini haisvike masendimita gumi pakureba, asi inokwana kuburitsa ruzha rwemhando yepamusoro mu10 madhigirii. Uye zvakare, iyo yekuwedzera yeimwe HomePod inokutendera iwe kuti ugadzire stereo ruzha, inovimbisa yakatenderedza ruzha mune inonzwika kuburitsa uye multimedia zvirimo. Asi zvakadaro, Kune vakawanda, iyo HomePod mini inotenda kuti inofanira kunge iri kupfuura mutauri. Asi matauriro ayo haatenderi kuti ishandiswe zvakanyanya pane zvayakasikirwa: kuve mutauri.
Ndosaka vakomana kubva 9to5mac Vaenda kubasa uye vakagadzira pfungwa yekuti chingave chigadzirwa chitsva kubva kuBig Apple. Mutauri ari pabhiza pakati peApple Watch neHomePod, achivhara gap, iro ravadaidza Kumba Pod Touch. Ngatiyeukei kuti yazvino Apple mini speaker haina skrini seyakadaro, asi kuti inovhenekera nemifananidzo kana isu tichidaidza Siri kana kugadzirisa huwandu hwezvinhu zvinounzwa pamusoro.
Unogona kufungidzira HomePod ine bhatiri rekunze? Mark Gurman anoti Apple yakashanda pazviri
Inzwi uye kushingaira kupindirana, protagonists yechigadzirwa
Iyi nyowani HomePod Touch yaizosanganisira touch screen izvo zvingabvumira mushandisi kuti ashande nesimba neHomePodOS interface. Kuve nechokwadi chekushandisa kweHomePod mukurukuri airereka zvishoma kuti asiye mudziyo wakarereka kuitira kuti mushandisi agone kubata chidzitiro oblique uye kwete vertically sezvazviri kuitika izvozvi (asi pasina skrini, hongu).
Iyo S5 chip inotakurwa neHomePod yazvino yaizosvikawo kuHomePod Touch. Ichi chip chakaiswawo paApple Watches, saka iyo HomePod inoshanda sisitimu, audioOS, yakagadzirirawo kusimbisa iyo interface yediki skrini, senge inoratidzwa mune iyo pfungwa. Iyi skrini yaizogamuchira maapplication akadai Wachi, iine mativi akasiyana uye kudyidzana, multimedia kudzora nekusarudza nziyo, rondedzero, uye yekutamba kudzora, kufona manejimendi, imba otomatiki kutonga, nezvimwe.
Mune mamwe mazwi, isu taizove nekutonga kwese zviito zvatingaite izvozvi naSiri pachiratidziri. Nekudaro, dzimwe nguva Siri inodzikamisa zvishoma kushandiswa kwese mabasa eHomePod. Kuve nechidzitiro kwaizobvumira mushandisi kuve nekutonga kwekuona uye kupindirana nehurongwa zvakananga.
Kana zviri zvemutengo, vagadziri veiyo pfungwa vanoisa mutengo wemadhora zana nemakumi mapfumbamwe neshanu kuHomePod Touch. Kuve neiyo $199 Apple Watch Series 3 zvakare, ingave nhanho yepakati pakati peyekutanga HomePod (isisiri kutengeswa), isina sensor Apple Watch Series 199, uye HomePod mini. Iyo 'Frankenstein' yaizodaidzira iyo yazvino HomePod mini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Pfungwa inoratidza iyo HomePod touch: yekubata skrini pane Apple speaker
WhatsApp iri kupedzisa ruzivo kuendesa chats kubva kuAndroid kuenda ku iPhone
Apple Watch yekuchaja nyaya ichagadziriswa muwatchOS 8.4